Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Emirates na-ebido ụgbọ elu ọzọ na Mexico City site na Barcelona
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Emirates ejiri nwayọ nwayọ wee malite ọrụ n'ofe netwọkụ ya
Ọrụ bidoro n'etiti Dubai-Barcelona-Mexico ga-ejere ndị ahịa Emirates ozi na Mexico ma nye ndị njem nhọrọ karịa
Ọrụ ahụ ga-enyekwa njikọta ọzọ na ahịa ụwa maka mbupụ Mexico
Emirates ekwuputala na ya ga-ebido ọrụ anọ kwa izu na Mexico City (MEX) site na Barcelona (BCN) site na 2nd July 2021, mepee njikọta na ịkwalite azụmahịa na njem nleta na-enye ndị ahịa n'ụwa niile njikọta, mma na nhọrọ.
BCzọ BCN-MEX ga-arụ ọrụ na klas abụọ Emirates Boeing 777-200LR nke na-enye oche oche 38 Business Class na nhazi 2-2-2 na oche 264 na klas akụ na ụba. Emirates ụgbọ elu EK255 ga-apụ na Dubai na 03: 25hrs, na-abata na Barcelona na 08: 35hrs tupu ọ pụọ ọzọ na 10: 50hrs wee rute Mexico City na 16: 05 n'otu ụbọchị ahụ. Kgbọ elu nlọghachi EK256 ga-apụ Mexico City na 19:40 elekere, na-abata na Barcelona na 13: 45hrs n'echi ya. EK256 ga-apụ ọzọ na Barcelona n'otu ụbọchị ahụ na 15: 30hrs na-aga Dubai ebe ọ ga-abata na 00: 15 elekere n'echi ya (oge niile bụ mpaghara).
Ọrụ bidoro n'etiti Dubai-Barcelona-Mexico ga-emere ndị ahịa Emirates na Mexico ma nyekwuo ndị njem njem si Europe, India, South East Asia na Middle East site na Dubai ma ọ bụ Barcelona. Ọrụ ahụ ga-enyekwa njikọta ọzọ na ahịa ụwa maka mbupụ Mexico dịka avocados, mkpụrụ osisi, mango, akụkụ ụgbọ ala na ọgwụ. Emirates SkyCargo na-efega ndị na-ebu ibu na Mexico City site na 2014 kemgbe, na-ede akara afọ asaa nke arụmọrụ na mba a ọnwa. N'oge ọrịa COVID-19, Emirates SkyCargo gara n'ihu na njikọta ibu ya na Mexico City na ụgbọ elu na-ebu ndị njem na ndị njem, na-eweta ọgwụ mgbochi PPE na COVID-19 dị oke mkpa na mba ahụ ka na-aga n'ihu na-akwado mbupụ Mexico.
Emirates ejirila nwayọ nwayọ wee malite ọrụ n'ofe netwọkụ ya. Ebe ọ bụ na ọ maliteghachiri njem nlegharị anya na July, Dubai ka bụ otu n'ime ezumike ezumike kachasị ewu ewu n'ụwa, ọkachasị n'oge oge oyi. Obodo a na-emeghe maka azụmahịa mba na ndị ọbịa. Site n'ụsọ osimiri na ihe nketa na-eme ka anyanwụ na ụlọ ọrụ ntụrụndụ, Dubai na-enye ọtụtụ ahụmahụ ụwa. Ọ bụ otu n'ime obodo izizi ụwa iji nweta stampụ njem njem site na World Travel and Tourism Council (WTTC) - nke na-akwado usoro zuru oke na nke dị irè nke Dubai iji hụ na ahụike na nchekwa ndị ọbịa.
Ndị ahịa Emirates si UAE na gburugburu ụwa nwere ike ịhazi njem ha ugbu a na ịdị nhịahụ dịka Mexico ka na-emeghe maka ndị njem na ndị nleta. Mexico bụ ebe na-ewu ewu maka njem na njem njem zuru ụwa ọnụ, ọkachasị UAE, Spain, Pakistan, Singapore, Egypt na Lebanon. Mexico bụkwa obodo nke Middle East obodo ndị nwere ike ugbu a iji uru nke maliteghachi ọrụ.